Yakasarudzika - Goodao Technology Co, Ltd.
Bhatiri Charger & Svetuka Starter
Inverter & Shanduri
Tail & Trailer Mwenje Kits
Yakatangwa muna 1995, HANGZHOU TONNY Electronics & TOOLS CO., LTD.ndeimwe yekutungamira vanogadzira uye vanopa zvigadzirwa zvemagetsi zvemagetsi nemidziyo muChina. Yedu fekitari iri muXianlin Industrial Zone, Yuhang District, Hangzhou 311122, Zhejiang ine 20,000 mativi mativi epasi uye 15,000 mativi emamita nzvimbo yekuvaka.
Kambani yedu inoshandira dhizaini, kugadzira nekuparadzira magetsi emagetsi uye maturusi, akadai semota bhatiri charger, inverters, kusvetuka matangi, mabasa ebasa, mwenje beacon, vateveri vemotokari, vatevedzeri veDC DC, pombi dzemhepo, auto vacuum cleaner. ita OEM uye ODM masevhisi zvakare. Ukuru hwekugadzira hwekugona kwematanho gumi nemana emusangano mitsara, mizhinji yemachina epamberi majekiseni, uye vashandi vanopfuura mazana mana nemakumi mashanu ndivo simba redu rekugadzira simba.Kana pane hwakasimba hunhu hwekudzora, takamisa rabhandi rekuyedza rabhodhi rakanyatsogadzirirwa neyekuvandudza matanho ekuongororesa. Iyo nyanzvi QC &QA timu inogona kuvimbisa kuitisa ISO9001: 2015 kunaka kudzora system. Zvichakadaro, R & D timu yevanodarika makumi maviri ruzivo ruzivo vanogadzira zvigadzirwa zvitsva zvekugadzira uye nekupa hunyanzvi hwese rutsigiro rwekutevera mushure mekutengesa.
Zviuru makumi maviri
Nzvimbo yakazara yefekitori
Mainjiniya huwandu: makumi maviri vanhu
Gadzira Software: Solidworks, Pro / E, Rino, nezvimwe.
Ipa OEM & ODM kune vatengi semuenzaniso wavo, kudhirowa kana pfungwa; Ipa zvinodiwa zvakakosha kune vatengi kuitira kuti chengetedza mhando uye ienderane nezvinodiwa pamusika.
Dhizaini Dhizaina Timu
Plastiki jekiseni chirimwa
Plastion jekiseni huwandu: 100g kusvika 2500g;
Kuwanda kwemuchina: 20+
Iko hukuru hukuru hwekugadzira hwe14 standard gungano mitsara uye vanopfuura 450 vashandi isimba rekutanga simba redu, A nyanzvi QC &QA timu inogona kuvimbisa unoitisa ISO9001: 2015 kunaka kudzora system.
Isu tine nharaunda yemakumi mashanu emawere emameter yekuwachira, sangana nemutengi kukumbira kwekuchengeta
System: ERP system yakashandiswa mukati mekosi yese.
Tine timu ine ruzivo yekuronga. Vazhinji vacho vane makore anopfuura gumi nemashanu echiitiko mukati
Tinogona kuremedza 3x40HQ midziyo panguva imwe chete.
Container Kuisa Gates
Isu tange tichigadzira zvigadzirwa zvitsva, uye nekushandira vatengi vedu mumisika yese yepasi. Vatengi vedu vanoremekedzwa vatengi vari kunakidzwa zvakanyanya kuzivikanwa munyika, seWal-Mart, Autozone, Scotts Kambani, Advance Auto Zvikamu uye Lidl nezvimwe.